Noocyada bacaha: sifooyinka, isticmaalka iyo tusaalooyinka | Ragga Stylish
Waxay kuxirantahay nooca maaddada iyo isticmaalka la siinayo iyaga, waxaa jira waxyaabo kala duwan noocyada bacaha. Waa wax soo saar inta badan la khasaariyo in kasta oo loo abuuray si ballaadhan. Waa dhif iyo nadir in macaamilku diido bac waxtar leh si uu alaabtiisa u qaato. Waxaa jira noocyo kala duwan oo boorsooyin ah oo la heli karo oo isugu jira kuleyl, caado, warqad iyo bacaha balaastigga ah ama boorsooyinka dhabarka lagu qaato. Isticmaalkoodu wuu ka duwan yahay mid walbana midbaa sifiican ugu habboon isticmaalka qaar ka badan kan kale.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee boorsooyinka, isticmaalkooda iyo faa iidooyinka qaar ay leeyihiin.
1 Boorsooyinka Khaaska ah ee Custom
2 Noocyada boorsada: boorsooyinka caadiga ah
3 Noocyada bacaha safarka ee caadiga ah
4 Bac caag ah oo khaas ah
Boorsooyinka Khaaska ah ee Custom
Si loo soo afjaro dhibaatada wasakhda balaastigga ah, waxaa fiican in loo isticmaalo bacda dharka lagu adeegto. Boorsooyinkan dib ayaa loo isticmaali karaa marar badan mana noqon karaan kuwo wasakheeya deegaanka. Waxay ku habboon yihiin suuqyada iyo dukaamada haddii ay shakhsi ahaan dusha sare ka muuqdaan waxaad yeelan kartaa qaab kuu gaar ah. Bacda maroku waa astaanta dhaqdhaqaaqa deegaanka oo inta badan lagu arko suuqyada dabiiciga ah iyo dukaamada. Waa xilli aynu ku quusnay innagoo leenahay maskax maskaxeed aad u badan. Fikradda haysashada bacaha dib loo isticmaali karo ayaa ah mid soo jiidasho leh oo ku filan markaan fiirino hab aan ku badbaadinno meeraheenna.
Waxaan dooran karnaa mid ka duwan noocyada bacaha ee ka samaysan cudbiga bey’ada u fiican ama waxyaabaha kale ee deegaanka u habboon. Looma isticmaali karo oo kaliya suuqyada waaweyn, laakiin suuqa beeralayda maxalliga ah. In kasta oo tayada badeecaduhu yihiin, haddana iyagu aad uma jecla inay bixiyaan baco. Sidaa darteed, waad ku qaadan kartaa ama ku keydin kartaa qalabkaaga noocan ah bacaha dharka shaqsiga ah. Waxay sidoo kale u adeegaan sidii bac xeebeed maadaama ay leedahay meel ku filan tuwaallo, qurxinta ama muraayadaha biyaha, iyo kuwo kale. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu deeqo buugaag duug ah, dhar iyo qurxin maadaama aan loo baahnayn. Waxaas oo dhan waa la samayn karaa iyada oo aan xitaa la dhaawicin dusha sare ee bacda. Bac balaastik ah ma taageeri doono adeegsiga badan.
Sidaa darteed, haddii aad tahay ganacsade, bacda maroku waa aalad muhiim u ah ololaha suuqgeynta.
Noocyada boorsada: boorsooyinka caadiga ah
Qaab kale oo loo isticmaalo noocyada kala duwan ee boorsooyinka si loo qaado alaabada waa boorsooyinka caadiga ah. Waxaa jira moodooyin iyo qalabyo kala duwan oo abuuraya marada kala duwan oo aan xad lahayn si loo abuuro boorsada dhabarka. Waxay u dhexeeyaan nylon ilaa caag ama shiraac mid kasta oo leh faa'iidooyinkiisa gaarka ah. Hal shay, polyester-ku wuxuu si cajaa'ib leh ugu adkeysanayaa nabaad-guurka qorraxda waana ka jaban yahay. Dhanka kale, nayloonku wuxuu bixiyaa xitaa adkeysi badan iyo iska caabin nooc kasta oo curiye ah iyo dhibaato maalinle ah.
Iyadoo la tixgelinayo dusha sare ee daabacan si loo shakhsiyeeyo boorsada dhabarka, waxay sidoo kale u adeegtaa inay tahay qalab dhiirrigelin leh. Waad ku dhufan kartaa astaanta suufka wejiga hore ee shandada waxaadna u qaybin kartaa macaamiisha ama saamileyaasha. Waxaan kugula talineynaa inaad sameysid naqshad aad u soo jiidasho leh si ay macaamiisha u rabaan inay u qaadaan bacaha noocan ah.
Waxaa jira noocyo badan oo la heli karo oo laga kala xusho boorsooyinka gaarka ah. Haddii aad tagto xerada, malaha boorsada loo isticmaali karo in lagu qaado teendhada, bacda jiifka, qalabka jikada iyo dhar adag. Adeegsiga noocan ah waxaa ku jira boorsooyin dhabarka ku xirxiran oo dhabarka iyo suumanka si fiican u caawinaya si loo taageero miisaanka. Badanaa waxay kufiican yihiin kaamamka, shirkadaha buuraha iyo ciyaaraha dibada.
Noocyada bacaha safarka ee caadiga ah
Boorso kale oo ay tahay in lagu muujiyo liiska ayaa ah boorsada safarka ee la safeeyey. Waa badeecooyin soo gudbiya qaab aan rasmi ahayn iyo waxqabad. Waa boorsada lagama maarmaanka u ah in boorsooyinka isboortiga loogu qaado ciyaar ama jimicsiga. Caadi ahaan waa cabbirka ugu fiican ee lagu qaato dhar kugu filan, musqulaha qaarkood iyo wax kasta oo aad u baahan tahay. Baxsasho gaaban looma baahna inaad haysato shandad rogmaysa, laakiin nooc ka mid ah boorsada safarka ayaa ku filan. Waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan boorsada noocan oo kale ah waa in la cadaadin karo marka aysan buuxinaynin sidaasna ay ku horumarin karto adeegsiga.
Boorsada safarka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ujeeddooyin suuq-geyn sida aan ku aragnay boorsooyinka kale ee liiska ku jira. Maro shiraac ah waa shey ku habboon soo bandhigida sawirkaaga astaanta ama ku darista macluumaadka la xiriira ganacsiga.
Waxaan sidoo kale leenahay bacaha ciyaaraha caadiga ah. Iyagu waa kuwa u adeegi kara aalad suuqgeyn ah oo ku dar qaabab badan. Badanaa waxay ka sameysan yihiin naylon oo biyuhu ma galaan. Waxay ugu wanaagsan yihiin isticmaalka badeecadaha isboortiga ama qaadista buugaag culus. Badanaa aad ayey qiimo ugu leeyihiin fudeydkooda in kasta oo ay sidoo kale bixiyaan boos aad u tiro badan oo loo isticmaali karo baahiyaha kale sida ganacsiga iyo magaca shirkadda.
Boorsooyinka hadiyadeed ee shaqsiga ah ayaa ah kuwa sii xoojiya faahfaahinta hadiyadda. Sidan oo kale, waxaad ku muujin kartaa hal-abuurkaaga wax badan oo aad abuuri kartaa boorsooyin muuqaal ah oo ka tarjumaya shakhsiyaddaada. Waxaa loo isticmaali karaa shirkadaha oo loo abuuri karaa boorsooyin hadiyadeed oo ka tarjumaya tayada macaamiishaada. Waxay noqon kartaa dahab, khamri ama buugaag waxa gudaha ku jira, laakiin banaanka waxay ku jirtaa boorso hadiyadeed oo la beddeli karo. Magacaaga waa la daabacan karaa si qof walba uu u ogaado inay ka tirsan tahay shirkaddaada.
Bac caag ah oo khaas ah
In kasta oo ay ka mid yihiin kuwa ugu yar ee lagu iibiyo heerka shirkadda, haddana waxaa sidoo kale jira caagag caado u ah. Waxay kudhowaad qasab ku yihiin tafaariiqle kasta. Badanaa waa laga aqbali karaa dukaamada iyo dukaamada yaryar ee isticmaala bacda balaastigga ah. Ganacsi kasta oo leh himilooyin gaar ah iyo inuu abuuro summad macno leh oo muuqata, bacaha ganacsiga caagga ah ee caadada u ah waa lama huraan. Boorsooyinkan Waxay ka dhigayaan macaamiishaadu inay kor u qaadaan magacaaga markay ka baxaan dukaanka alaabtaada. Intaas waxaa sii dheer, macaamilku wuxuu u adeegsan karaa boorsada siyaabo badan waxayna xusuusin doontaa isaga waayo-aragnimada lama ilaawaanka ah ee ay soo martay shirkaddan. Waxaad isticmaali kartaa bacaha balaastigga ah ee la baabi'in karo si loo yareeyo wasakheynta deegaanka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto noocyada kala duwan ee boorsooyinka jira iyo adeegsigooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Noocyada bacaha